REHEFA MAHAZO ANTOKA FA VOAVONJY TOKOA NY MINO…
(II Samoela 7:18-24, Lioka 1:39-56, Tit 3:3-7)
Ry havana malala, fotoana fohy sisa dia ho avy ilay andro lehibe atokan’ny kristianina hankalazana ny nahaterahan’ny Mpamonjy, izay manome antoka antsika ny amin’ny hoe famonjena, ary ny lohahevitra rahateo izay mbola banjinintsika FJKM dia ny hoe: “Mahazo antoka ny famonjena ny mino”, koa amin’izany:
I REHEFA MAHAZO ANTOKA FA VOAVONJY TOKOA NY MINO DIA MAHATSAPA NY FAHALEHIBEAZAN’ANDRIAMANITRA
Ny II Samoela 7:18-24 dia vavaka nataon’i Davida mpanjaka nanehoany ny fahalehibeazan’Andriamanitra. Miavaka amin’ny rehetra Izy, ka hoy izy: “Lehibe Ianao, Jehovah Andriamanitra, tsy misy tahaka Anao, tsy misy Andriamanitra afa-tsy Ianao (II Sam 2:22). Ary raha nanao izao vavaka izao I Davida dia tamin’ny fanentre-tena tokoa, satria izao no nambarany “zinona moa aho, Jehovah Tompo ô? Zinona ny mpianakaviko, no novimbininao mandrak’ankehitriny aho”. Ny fahatsapany izany tsy fahamendrehany izany indrindra anefa no mbola nampitoeran’Andriamanitra taminy sy ny taranany ny famindrampony ka antony izao vavaka izao izay nanehoany fa lehibe Andriamanitra, miavaka Izy ary tsy misy toa Azy. Mahazo antoka ny famonjena ny mino. I Davida dia niaina izany, ry havana, ka izany no nanandratany vavaka maneho ny fahalehibeazan’Andriamanitra.
Ry havana, ao anatin’ny vanim-potoanan’ny advento isika izao, izay fotoam-piandrasana ny fiavian’ny Mpamonjy. Moa ve tsapantsika ny fahalehibeazan’Andriamanitra izay nanome antsika ny Mpamonjy dia i Jesoa Kristy. Teny tonga nofo, ho avotra ho antsika? Ary aiza ny fanantenantsika? Mbola hiantehatra amin’ny famonjen’ny hafa izay tsy mahavonjy ve isika ka hanantena olona na sampy? Sa ilay Mpamonjy tokan’Andriamanitra izay andrasantsika ka antoka ho antsika ny famonjeny? Anao ny safidy fa izao, lehibe azo antoka ny Tompo!
II REHEFA MAHAZO ANTOKA FA VOAVONJY NY MINO DIA MANEHO FIDERANA AN’ANDRIMANITRA
Modely mendrika halain-tahaka ny fomba nankalazain’i Maria an’Andriamanitra ao amin’ny Lioka 1:39-56, ry havana. I Maria dia ravoravo amin’Andriamanitra noho ny asa famonjena lehibe (and 47) izay ataony eo amin’ny fiainany. Eny fa na dia ny manodidina azy aza dia voataona noho izany fahasambarana hita eo aminy izany (and 48). Tsarovany ny fampanantenana nataon’Andriamanitra ho an’ireo taranak’i Abrahama rehetra (and 55). Tsy nivadika tamin’ny teny nataony tokoa mantsy Andriamanitra ny amin’ny teny fikasany nataony ny amin’ny filazana nataony tamin’i Abrahama manao hoe: “… aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany.”(Gen 12:3). Ary izany no nampipololotra fiderana avy tao am-pon’i Maria.
Ry havana, miantso anao ny Tompo amin’ity anio ity mba hanana fanahy tia midera Azy koa. Tsapanao ve fa efa nanao zava-mahasoa teo amin’ny fiainanao Andriamanitra? I Jesoa Kristy dia nanao ny Fanavotana sy Famonjena noho ny fitiavany antsika. Amin’izany dia azon’ny mpino atao sahady ny mahazo antoka ny amin’ny mandrakizainy sy ny fitantanan’ny Tompo ny fiainany dieny ety an-tany. Koa miderà ny Tompo! Mihirà ho Azy ! toa an’i Maria!
III REHEFA MAHAZO ANTOKA FA VOAVONJY TOKOA NY MINO DIA MIAINA NY FAMINDRAPON’ANDRIAMANITRA
Hita taratra indrindra ity famindrapon’Andrimanitra ity ao amin’ny Titosy 3:4-5. Fintinin’i Paoly eto ny filazantsaran’i Kristy iray manontolo ka nilazany fa tonga tao amin’ny fahamaizinana sy ny faharatsian’izao tontolo izao izay nanandevo antsika Andrimanitra Mpamonjy , dia i Jesoa Kristy izany. Ka novonjeny isika, tsy hoe noho ny fankatoavantsika ny fitsipika ara-pivavahana na nohon’ny fanaovantsika asa taty am-piangonana, fa noho ny fitiavany antsika sy ny famindrapony tamintsika. Dia niteraka antsika indray Izy ary miasa tsy miato ato anatintsika amin’ny alalan’ny “fanavoazan’ny Fanahy Masina”.
Isika koa, rehefa mahazo antoka fa voavonjy, dia antsoina isika hiaina ny famindrapon’Andriamanitra. Ivelomy ny maha olona teraka indray anao. Fa olom-baovao ianao izay olona ao amin’i Kristy. Ekeo ny asan’ny Fanahy Masina manavao anao isan’andro isan’andro. Mandrosoa amin’ny finoana sy ny fanompoana an’Andriamanitra!
Tsarovy ary ry havana, fa ny olona mahazo antoka ny famonjena dia mahatsapa ny fahalehibeazan’Andriamanitra sy mahay maneho fiderana Azy ary miaina ny famindram-pony. Koa moa ve efa mba nanao izany ianao? Diniho izany dia tanteraho ry havana. Ho voninahitr’Andriamanitra irery ihany! Amen.